News from Asia via RSS — မွနျမာဌာန
ur press release is very indefinite & NOT transparent;
ur press release is very much diplomatic(redTaped) ;
sounds very much န၀တ/နအဖ။
when & how soon will the political prisoners be released?
(immediate & uncoditional release expected)
how soon and how many troops will be called back?
(details of plan expected)
ph number သိချင်ပါတယ်
ရှမ်းတိုင်းရင်းသူလေး။ ရခိုင်တိုင်းရင်းသားလေး။ ချင်းတိုင်းရင်းသူလေး။ ဗမာအမျိုးသားကြီး ဟုတ်လာ။ အသုံးအနှံးတွေကြောင်း......မညီညွတ်နိူင်ဘူး